सरकारलाई गाली गर्नेले मास्क लगाउन त सक्छनी - Likhu Online
१८ श्रावण २०७७, आईतवार ०८:५७ प्रकाशित
काठमाण्डाै – पछिल्ला दिनमा काठमाण्डौमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ । परीक्षण बढाउने हो भने काठमाण्डौको समुदायमा धेरै कोरोना छ भन्ने चर्चा छ । के काठमाण्डौमा साँच्चिकै जोखिम बढेको हो ? यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग गरिएको कुराकानी ।
पछिल्लो २४ घन्टामा ७६८ सङ्क्रमित थपिए, पाँचको मृत्यु
अति प्रभावित १४ जिल्ला ; भिडभाड हुनेठाउमा नजान मन्त्रालयको अनुरोध
भारतमा कोरोना सङ्क्रमण तीब्र, २४ घण्टामा १ लाख ६९ हजार सङ्क्रमित
सुदूरपश्चिमका तीन जनामा नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ५३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
भारतको केही राज्यमा कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च दरमा वृद्धि
कोरोनाबाट थप ८० सङ्क्रमित थपिए, १२१ कोरोनामुक्त भए
भारतबाट अग्रीम भुक्तानीमा २० लाख डोज कोरोना खोप ल्याइने